Fitaovana fiarovana ny toeram-pitrandrahana - Mpanamboatra fitaovana fiarovana an-tsitrapo ao Shina, mpamatsy
ZYX120 Mpanavotra Oxygène voatokana voatokana
Fampiharana Ny ZYX120 Isolated Compressed Oxygen Self-Rescuer (fohy ho an'ny mpamonjy tena) dia mampiasa oksizenina voafintina ho loharanon-drivotra. Izy io dia rafitra fiarovana fofonaina manokana izay manana ny toetran'ny fanoherana ny taovam-pisefoana kely, ny mari-pana ambany, mora, azo antoka ary azo itokisana, azo ampiasaina indray, sns. Mihatra amin'ny toeram-pitrandrahana arintany sy ny tontolo iainana voaloton'ny poizina izy io. entona na tsy misy gazy oksizenina. Ny mpiasa dia mitafy azy haingana ...
Oxygène voafintina voaroaka ZY45
Modely ho an'ny mpamonjy voina voatokana oksizenina voarindra: ZYX45 Fotoana: 45 minitra 45 minitra faharetan'ny fitrandrahana tena mpamonjy tena, fitaovana fiarovana manokana ny fitrandrahana mari-pahaizana Qualification: Certificat de l'Etat de la pomme d'exploitation de croissance de recherche des potsitrika ZYX45 Vonjy voina (Ovay manokana) -rescuer) mandray oksizenina voafintina ho loharano amin'ny rivotra. Izy io dia rafi-piarovana miaina manokana mihodina izay misy ny litera kely ...
Ora fitaovam-pisefoana irery
Fampiharana Isaky ny misy ekipa vonjy taitra mamonjy aina na mamono afo, ambonimbony na ambanin'ny tany, dia tonga amin'ny azy manokana ny fitaovana HYZ4 (B). Na ampiasaina mandritra ny asa famonjena na famonoana afo any amin'ny toeram-pitrandrahana, tionelina na fantsom-piaramanidina ambanin'ny tany izay misy ny gazy na oksizenina tsy ampy fanampiana, ny HYZ4 (B) Fitaovana miaina aotom-pifandraisana mihidy tena irery no safidy voalohany. Mpampiasa matihanina maherin'ny 10.000 no miantehitra amin'ny HYZ4 (B) Closed misy azy manokana ...
Fitaovana miaina boriborosy mihidy mihidy tena
fitaovam-pisefoana vonjy taitra azo entina) (Fitaovam-pisefoana 4 ora) Fepetra takiana: Fampiharana fanamarinana fanamarinana fanamarinana fanamarinana taratasy fanamarinana fanamarinana isaky ny ekipa vonjy maika na famonoana afo, eo ambony na eo ambanin'ny tany, miditra ao ny fitaovana HYZ4 Closed Circuit Breathing. ny azy. Na ampiasaina mandritra ny asa fanavotana na famonoana afo any amin'ny toeram-pitrandrahana, tionelina na fantsom-by ambanin'ny tany izay misy tsy fahampian'ny gazy na oxygen insufficien ...
Fitaovam-pisefoana tena irery HYZ2
Modely: HYZ2 / HYZ4 Fepetahana: Fampahafantarana fanamarinana fanamarinana fanamarinana fanamarinana fanamarinana taratasy fanamarinana fanamarihana isaky ny ekipa vonjy maika na famonoana afo, ambony na ambanin'ny tany, HYZ2 Fitaovana miaina aosin-kibo mihidy mihintsy. Na ampiasaina mandritra ny asa famonjena na famonoana afo any amin'ny toeram-pitrandrahana, tionelina na fantsom-by any ambanin'ny tany izay misy ny gazy na oksizenina tsy ampy fanampiana, HYZ2 Closed Circuit mihidy amin'ny tenany ...
Metatra taratra ultraviolet UV3000
Modely: UV3000 Fampidirana: UV3000 Ultraviolet radiation metatra dia herin'ny spectral lehibe. Ampiasaina indrindra amin'ny fandrefesana ny hakitroky ny taratra ultraviolet. Ny singa dia Uw / cm2. Ny sensor dia eo an-tampon'ny fitaovana. Mora ampiasaina ary marina amin'ny fandrefesana. Fampiasana: ny fizaham-pahasalamana momba ny asa eo amin'ny indostria Ny fanandramana fanakanana ny fahamendrehan'ny maritrano, ny sarimihetsika masoandro ary ny vera fitaratra amin'ny UV Ny refin'ny hazavana amin'ny loharanom-pahazavana ultraviolet (ny masoandro, UV la ...
Modely: CCZ1000 Marika: BJKYCJ Famaritana Fotoana famakiana fotoana Detector vovoka azo aseho Digital, refy marina, fahombiazana milamina, kely habe, hazavana amin'ny lanjany Fampiharana vaovao ho an'ny mpamaky mivantana sy mamaky vovoka azo entina, ampiasaina hamantarana ny fifantohan'ny rehetra vovoka na vovo-habaka amin'ny tontolo iainana misy etona mora mirehitra na mipoaka miaraka amin'ny toetra mampiavaka ny fampisehoana dizitaly, ny refy marina ary ny fahombiazan'ny milamina, kely ny habeny, maivana ny lanjany, mora sy mpiara-miasa ...
Endri-javatra: 1, faribolana lehibe hita, ny refy farany azo refesina hatramin'ny 200000LUX 2, fampisehoana an-tsary avo lenta: 0.1LUX / 0.01FC 3, fisafidianana fifindrana mandeha ho azy 4. Fandrefesana ny taha ambony indrindra, fandraisam-peo farany ambany 5. Fivadihan-tarika LUX / FC 6. Vakiteny natao fanidiana hidy, manidy ny tombam-bidy refesina 7. Ireo angon-drakitra fanangonana angon-drakitra Tondro ara-teknika FITEHIRIZAM-BOKIN'NY LALAHANA 200LUX 0,1 ± 3% + 10dgts 2000LUX 1 ± 3% + 10dgts 20000LUX 1 ± 4% + 10dgts 200000LUX 1 ± 4% + 10dgts Toetra ankapobeny. ..
YSD 130Interinsically azo antoka Digital Level Level Meter
Modely: YSD130 Fepetram-pahafantarana: Fanamarinana fanamarinana fanamarinana fanamarinana fanamarinana fanamarinana taratasy mivaingana: YSD130 Digital Sound Level Meter dia fitaovana azo antoka sy voaporofo amin'ny fipoahana, natao manokana hanaovana fandrefesana tabataba ho an'ny fitrandrahana arintany ambanin'ny tany sy ny fiarovana ny toeram-pitrandrahana. Mazava ho azy fa ampiharina amin'ny fandrefesana amin'ny feo any amin'ny orinasa, sekoly, birao, fidirana amin'ny fifamoivoizana ary karazana tontolo iainana rehetra izay toa fandrefesana ilaina. Featu lehibe ...
Modely ； JFY-4B Fampiharana: JFY-4B Multi-Function Ventilation Meter dia fitaovana azo antoka sy azo antoka ho an'ny fipoahana, natao manokana handrefesana ny mari-pana, ny tsindry samihafa, ny hafainganan'ny rivotra ary ny fifantohan'ny entona metana. Izy io dia ampiasaina amin'ny fanoherana ny rivotra, HVAC ary fisafoana ny fantsona. Efa nohamafisina tsara ny zava-maneno talohan'ny nialan'izy ireo tamin'ny orinasa. Raha mbola mampiasa tsara ianao dia afaka miasa maharitra mandritra ny fotoana maharitra ilay fitaovana. Endri-javatra lehibe: Mora vakiana O ...
Modely ； JFY-4 Fampiharana: JFY-4 Multi-Function Ventilation Meter dia fitaovana azo antoka sy azo antoka ho an'ny fipoahana, natao manokana handrefesana ny mari-pana, ny tsindry samihafa, ny hafainganan'ny rivotra ary ny fifantohan'ny entona metana. Izy io dia ampiasaina amin'ny fanoherana ny rivotra, HVAC ary fisafoana ny fantsona. Efa nohamafisina tsara ny zava-maneno talohan'ny nialan'izy ireo tamin'ny orinasa. Raha mbola mampiasa tsara ianao dia afaka miasa maharitra mandritra ny fotoana maharitra ilay fitaovana. Endri-javatra manan-danja: mora vakiana On-sc ...
Modely: JFY-6 Fitaovana fanamafisam-peo maro metatra fanamafisam-peo manerantany Ventilation Meter ventilation metatra fikorianan'ny rivotra mari-pahaizana Famaritana: Toro-làlana momba ny fiarovana amin'ny arintany, porofo fanamarinana fanamarinana: haingam-pandeha, hafanana, tsindry samihafa, tsindry avy amin'ny atmosfera, hamandoana, methane CH4 Fampiharana: JFY -6 Multi-Function Ventilation Meter dia fitaovana azo antoka sy azo antoka ho an'ny fipoahana, natao indrindra handrefesana ny tsindry barometrika, ny fahasamihafana ...